Ciidamo Itoobiyaan ah oo lala beegsaday Qaraxyo
Wararkii: Oct 8, 2007
Taliyihii ciidamada Itoobiya ee jooga Soomaaliya oo la bedelay
Ciidamo iyo Gawaari tikniko ah oo Maxaakiimta ka tirsan oo Bu’aale lagu arkay…
Khilaafkii u dhexeeyey C/llaahi Yuusuf iyo Cali Max’ed Geedi oo la sheegay in uu weli taagan yahay
Kongareeska Mareykanka oo ansixiyey in Itoobiya cunaqabateyn la saaro…
Wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta oo si kulul u cambaareeyey hadalkii Wasiirka dib u heshiisiinta Mareeye
Dowladda Kenya oo wada sidii ay Qaramada Midoobey door weyn uga qaadan lahayd nabad ku soo dabaalida Soomaaliya
Oct 8, 07: Inta beri oo laga joogo markii xabashidu gashay: Kismaayo (281), Muqdisho (285), Beledweyne (288), Baydhabo (296), Galkacyo (317), Sarbeebtii Diinaari
Ciidamo Itoobiyaan ah oo hawlgal ka waday xaafado ka tirsan degmada Heliwaa gaar ahaan SOS iyo Suuqa Xoolaha ayaa shalay waxaa lala beegsaday qaraxyo.
Qaraxyaadaan ayaa waxaa la sheegay in ay khasaare ka soo gaartay ciidamada Itoobiya iyo dad rayid ah oo ka agdhawaa iyaga.
Qaraxyadaasi kadib ayaa la sheegay in ciidamada Itoobiya ay halkaasi ka sii wadeen hawlgalkoodii iyadoo la sheegay in aysan ridin rasaas.
Hawlgalka ka socda Suuqa Xoolaha ayaa maalintii saddexaad galay, iyadoo wax la taaban karo oo ay ciidamada Itoobiya gaareen aysan jirin, waxaana weli sii socda qaraxyada iyo weerarada lagu hayo Ciidamada Itoobiya.
Ciidamada Itoobiya ayaa shalay galab dib isaga laabtay fariisimahoodii, iyadoo xalay la maqlayey rasaas goos goos ah oo an la garaneyn cidda rideysa.
Hawlgalka ayaa la sheegay in uu socon doono mudo labaan maalmood ah, waxaana walwal ka muujiyey dadweynaha Soomaliyeed oo sheegay in hawlgalkaasi uu keeni karo dhibaatooyin, iyagoo soo jeediyey in Dowladda Federaalka timaado talaabo ka duwan midda haatan ay adeegsaneyso.
Warar aanu ka helnay saraakiil ka tirsan Ciidamada Dowladda Federaalka ayaa sheegay in la bedelay taliyihii ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya Gabre, waxaana xilkiisa loo dhiibay janaraal kale, waxayna saraakiishaasi sheegeen in sababaha loo bedelay Gabre tahay kadib markii ay sii cakirantay xaaladda nabadgelyo ee Magaalada Muqdisho, isla markaana weeraro joogto ah lagu hayo ciidamada Itoobiya.
Gen. Gabre oo gaaray Magaalada Adis-Ababa ayaa wax faahfaahin ka bixin bedelkiisa. Gabre oo si weyn u bartay shacabka Soomaaliyeed, Mas’uuliyiinta Dowladda Federaalka ayaa waxaa la sheegay in uu xiriir dhow la lahaa qaar ka mid ah Madaxda sare ee Dowladda. Janaraalka cusub ayaa loo keenay in uu ka qayb-qaato hawlgalka la sheegay in ciidamada Itoobiya iyo kuwa Dowladda Federaalka ku sugayaan Muqdisho, waxaana la sheegay in uu horey u soo raacay ciidamo badan oo Itoobiyaan ah oo Muqdisho soo gaaray.
Hawlgalka ugu xoogan oo dhici doona Tobanka October waa xiligii la doortay Madaxweyne C/llaahi, waxaana la sheegay in maalintaasi soo gali doonin wax dad ah kana bixi doonin, sidoo kalana waxaa la baari doonaa dhamaan goobaha ganacsiga iyo guryaha. Hawlgalkaan ayaa waxaa la sheegay in ay ka qaybqaadan doonaan ilaa iyo 20-kun oo Itoobiyaan iyo ciidamada Soomaaliya, iyadoo la sheegay in ciidamada Itoobiya degi doonaan dhowr goobood oo ku yaala Magaalada Muqdisho iyo waliba saldhigyada Booliiska Gobalka Banaadir, waxaana ciidamadaasi Itoobiya la sheegay in ay la shaqeyn doonaan ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka. Maamulka Gobalka Banadir ayaa dhawaan waxa uu soo gudbiyey qorshe lagu sugayo ammaanka Gobalka Banaadir kaas oo uu ansixiyey Golaha Wasiirada, iyadoo ciidamadu ay ka hawlgali doonaan ilaa iyo 52 barood oo Magaalada Muqdisho ku yaala.
Wararka naga soo gaaraya gobalka J/dhexe gaar ahaan Magaalada Bu’aale waxay sheegayaan in shalay deegaankaasi laga dareemay dhaqdhaqaaq ciidan oo xoogan, waxayna dadku sheegeen in la arkayey Gawaari fara badan oo tikniko ah iyo gawaari kale oo xamuul ah oo aan la garaneyn waxa ay sidaan.
Ciidamadaan ayaa xoogoodu waxa uu ka yimid deegaanka dhoobley, waxaana la sheegay in ay doonayaan in ay fariisin ka sameystaan Magaalada Bu’aale ee Gobalka J/hoose.
Dadweynaha deegaanka ayaa si weyn u soo dhaweeyey ciidankaasi, hase yeeshee kooxo ka soo horjeeda ayaa sheegay in arrintaani keeni karto iska hor imaad ka dhaca gobalka.
Waa ciidankii ugu xooganaa oo ay leeyihiin Maxaakiimta Islaamiga ah oo lagu arko gobalkaasi, ilaa iyo haatanna ma jirto cid ka hor tagtay ciidankaasi, iyadoo Dowladda Federaalka iyo Ciidamada Itoobya aysan halkaasi ku xoog badneyn.
Web-Site-ka lagu magacaabo Power Interest news report, ayaa shaaciyey in uu weli taagan yahay khilaafkii u dhexeeyey Madaxweyne C/llaahi Yuusuf iyo Ra’isul Wasaare Cali Max’ed.
“khilaafkaan waa mid aan haatan bilaaban balse uu horey u soo jiray, C/llaahina waxa uu doonayaa in uu la mid noqdo madaxda deriska la ah dalkiisa, sida Itoobiya, Ereteriya iyo Jabuuti oo iyagu xukunka keligood gacanta ku haya” ayaa lagu yiri warbixin uu soo saaray Web-Site-kaasi.
Golaha Baarlamaanka ayaa waxa uu yeeray labada mas’uul in ay si dhaqsi leh u yimaadaan Magaalada Baydhabo si loo ogaado waxa dhaliyey khilaafkaasi, hase yeeshee warbixinta web-site-ka ayaa waxay sheegeysaa in Ra’isul Wasaare Geedi laga yaabo in tegistiisa Magaalada Baydhabo ay keeni karto in xilka looga qaado, hase yeeshee Ra’isul Wasaare Geedi taageero badan ayaa ku leeyahay golaha Wsiirada, iyagoo dhowr jeer ooh ore cod siiyey.
Web-Site-ku waxa uu sheegay in Dowladda Federaalka ay tahay mid sii wiiqmeysa, balse ay ku taagan tahay joogitaanka ciidamada shisheeye, gaar ahaan kuwa Itoobiya.
Kongareeska Mareykanka ayaa dhawaan ansixiyey in cunaqabateyn lagu soo rogay kadib markii taliska wadankaasi ka arimiyaha uu ku xadgudbay xaquuqda Aadanaha, Isla markaana uu wadanka ku soo dabaali waayey dimuquraadiyad dhab ah.
Kongareeska oo si wadajir ah isugu raacay go’aankaasi ayaa waxa uu haatan ansixintiisa hor yaalao Madaxweynaha Mreykanka Bush oo la sheegay in si aad ah taxadar uga muujin doono go’aankaasi, iyadoo Dowladda Mareykanka ay xiriir dhow la leedahay Dowladda Itoobiya.
Cunaqabateyntaan ayaa lagu sheegay in ay tahay mid dhaqaalaha looga jarayo dowladda Itoobiya, sidoo kale waxay Dowladda Mareykanku sheegtay in ay joojin doonto safarada ay saraakiisha ugu sareeye Itoobiya iyo madaxdeeda ku tagaan dalalka Yurub iyo Mareykanka.
Cunaqabateyntaan ayaa ku soo beegantay xili ay ciidamada Itoobiya dagaalo ka wadaan Magaalada Muqdisho, oo ay maalin waliba ku dhimanayaan dad rayid ah.
Wakiilka Itoobiya u fadhiya dalka Mareykanka ayaa waxa uu soo jeediyey Dowladda Mareykanka in ay ka fiirsato cunaqabateyntaasi, isago sheegay in Dowladda Itoobiya ku dhaqaaqday talaabooyin lagu sugayo xaquuqda aadanaha.
Dhawaan ayay ahayd markii wafdi ka socday Qaramada Midoobey oo dhanka xaquuqda adanaha ay gaareen dalka Itoobiya, iyagoo soo arkay tuulooyin ay gubeen ciidamada Itoobiya, waxayna xaqiijiyeen in Dowladda Itoobya mar waliba ku xadgudubto xaquuqda aadanaha.
Waxaa maalintii doraad ahayd golaha Baarlamaanka ka hadlay wasiirka dib u heshiisiinta Max’ed Cabdi Xayir Maareeye oo sheegay in shirkii dib u heshiisinta uu ku dhamaaday fashil iyo musuqmaasu, hase yeeshee wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta Xasan Cabdi Guure ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona laheyn, isagoo sheegay in wax laga xumaado ay tahay hadalka ka soo yeeray wasiir.
Wasiir ku xigeenka waxa uu sheegay in shirka dib u heshiisiinta uu ku dhamaaday sidii loogu talagalay, waxa uuna sheegay in wasaarada dib u heshiisiinta si weyn ula socotay xaaladda shirka.
Ma ahan markii ugu horeysay oo Wasiir iyo Wasiir ku xigeen ay isku khilaafaan wasaaraddooda, dhawaan ayay ahayd markii Wasiirka dhallinyarada iyo Isboortiga Mawliid Macaane oo xilkii ka qaaday Guddoomiyaha Xiriirka K/koleyga Aadan Xaaji Yabarow Wiish, hase yeeshee wasiir ku xigeenka wasaraddaasi ayaa sheegay in guddiga Olombikada iyo Xiriirka K/koleyga ay Bulshada Soomaaliyeed u qabteen hawlo baaxad ah, isla markaana hadalka Mawliid Macaane uu yahay mid isaga ku kooban
Dowladda Kenya ayaa waxay warqad qoraal ah u gudbisay Qaramada Midoobey oo ay kaga codsaneyso sidii ay gacan weyn uga gaysan lahayd xaaladda murugsan ee ay ku jirto Soomaaliya. “Waxaan Qaramada Midoobey ka codsaneynaa in ay door weyn ku yeelato arrimaha Soomaaliya, si nabad loogu soo dabaalo” ayuu yiri Afhayeen u hadlay Dowladda Kenya oo sheegay in Dowladda Kenya ay dareemeyso in maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheyso xaaladda nabadgelyo xumo ee Soomaaliya. Dowladda Kenya waxay sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay in si dhaqsi ah loo geeyo ciidamo nabad ilaalin ah oo u huwan magaca dalladda Qaramada Midoobey, hase yeeshee Qaramada Midoobey ayaa ka fiirsaneysan in Soomaaliya u dirto ciidamo Nabad ilaalin ah, maadaama ciidamadii horey loogu ay ku fashilmeen doorkoodii.